व्यक्ति हत्या किन हुन्छ ? – MeroJilla.com
व्यक्ति हत्या किन हुन्छ ?
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता मनोज नेउपानेले रुपन्देहीको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ हुँदाहुँदै पनि घटना भएको बताए । उनले भने, ‘मनोज पुन अहिले धम्क्याएर पैसा असुल्न लागेको देखिन्छ । प्रहरीले सूचना संकलन गरिरहेको छ । ऊ अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीको पनि खोजी सूचीमा छ । जसरी पनि नियन्त्रणमा ल्याउँछौं।’